Tababare Zinedine Zidane Oo Calaamadeystay Xiddigii Uu U Xilsaari Lahaa Inuu Aamusiyo Neymar Lugta Hore Ee Wareega 16ka Champions League - Laacib.net
Tababare Zinedine Zidane Oo Calaamadeystay Xiddigii Uu U Xilsaari Lahaa Inuu Aamusiyo Neymar Lugta Hore Ee Wareega 16ka Champions League
by Saed Balaleti | Wednesday, Feb 7, 2018
Markii UEFA ay xaqiijisay in Dani Carvajal uu ganaax ku seegayo lugta hore ee wareega 16ka Champions League ee ay Real Madrid la ciyaareyso Paris Saint-Germain, tababare Zinedine Zidane ayaa maanka ku sii heystay xiddigii bedeli lahaa.
Nacho ayaa ka ciyaari doona booska daafaca midig marka ay labada kooxood ku kulmaan Santiago Bernabeu Arbacada soo socota ee 14ka bisha Febraayo, waxaana ay taasi la micno tahay inuu yahay ninka loo xilsaari doono inuu xadido weerarka Neymar.
Tirooyinka ayaa soo bandhigaya in Madrid ay si fiican u ciyaartay marka Nacho uu buuxiyo garabka midig ee daafaca. 17ka kulan ee uu 28 jirkaan ka ciyaaray booskaas, Los Blancos waxaa laga badiyay kaliya hal kulan, waxaana uu guuldaradaas ciyaaray kaliya sideed daqiiqo kulankii Champions League ee ay 2014-15 la ciyaarayeen Schalke.
Rikoorkiisa waa mid cajiib ah, 16ka kulan kale ee uu ka dheelay daafaca midig, Madrid waxa ay badisay 15 ka mid ah waxaana ay barbaro galeen kulanka kale.
Dhaawacyo iyo ganaaxyo ayaa ka dhigay Nacho xiddiga loogu isticmaalka badan yahay Madrid xilli ciyaareedkan. Ciyaaryahanka ka soo baxay akadeemiga kooxda ayaa dheelay 2,347 daqiiqadood isagoo ciyaaray in ka badan inta ay dheeleen Raphael Varane (2,153), Sergio Ramos (2,111) iyo Dani Carvajal (2,110).
PSG ayaana xusuus fiican u leh Nacho. Xilli ciyaareedkii 2015-16 waxa uu dhaliyay goolka kaliya ee ciyaartii PSG taasoo Real Madrid u xaqiijisay inay u soo baxaan wareega xiga ee Champions League.
Abdiwaasac Hussein 08-02-2018 at 2:14 am -
Nacho waa ciyartoy Tayo Heer-sare ah leh xakamayna doona Neymar
magacaa 07-02-2018 at 12:16 pm -
guul guul liverpool